Yeremia 25 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa ne amanaman no anya asɛm (1-38)
Aman no bɛsom Babilon mfe 70 (11)
Onyankopɔn abufuw nsã kuruwa no (15)
Mmusu befi ɔman so akɔ ɔman so (32)
Wɔn a Yehowa bekunkum wɔn (33)
25 Asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn wɔ Yuda man nyinaa ho ni. Ɛbae wɔ Yuda hene Yehoiakim,+ Yosia ba no afe a ɛto so anan a na ɛyɛ Babilon hene Nebukadnesar* afe a edi kan no mu. 2 Asɛm a odiyifo Yeremia ka faa Yuda man nyinaa ne Yerusalemfo nyinaa ho ni:* 3 “Efi Amon ba Yosia,+ Yuda hene no ahenni afe a ɛto so 13 so de besi nnɛ da yi, mfe 23 yi mu, Yehowa asɛm baa me nkyɛn, na mekɔɔ so kasa kyerɛɛ mo mpɛn pii,* nanso moantie.+ 4 Na Yehowa somaa ne nkoa adiyifo no nyinaa baa mo nkyɛn. Ɔsomaa wɔn mpɛn pii,* nanso moantie, na moanyɛ aso antie.+ 5 Wɔkae sɛ, ‘Yɛpa mo kyɛw, obiara ntwe ne ho mfi ne kwammɔne ne ne nneyɛe bɔne ho,+ na ama moakɔ so atena asaase a Yehowa de maa mo ne mo agyanom fi tete no so akyɛ. 6 Munnni anyame foforo akyi nnkɔsom wɔn; monnkotow wɔn, na mommfa mo nsa ano adwuma no nnhyɛ me abufuw. Anyɛ saa a, mede mmusu bɛba mo so.’ 7 “‘Nanso moantie me,’ Yehowa asɛm ni. ‘Na mmom mode mo nsa ano adwuma no hyɛɛ me abufuw de mmusu baa mo ara mo so.’+ 8 “Enti nea asafo Yehowa aka ni, ‘“Esiane sɛ moantie m’asɛm nti, 9 meresoma ama wɔakɔfa atifi fam mmusua nyinaa aba,”+ Yehowa asɛm ni, “na mɛma Babilon hene Nebukadnesar,* m’akoa no nso aba.+ Mɛma wɔaba asaase yi+ ne emu nnipa ne aman a atwa ho ahyia no nyinaa so.+ Mɛsɛe wɔn na mama wɔadan biribi a ɛyɛ hu ne biribi a nkurɔfo bɛtɛɛ wɔn anom ahwɛ,* na ɛbɛyɛ amamfo afebɔɔ. 10 Na mɛma ahurusi nnyigyei ne osebɔ nnyigyei,+ ne ayeforokunu nne ne ayeforo nne,+ ne ɔbo a wɔyam so ade* nnyigyei agyae wɔ wɔn mu, na kanea hann nso ayera afi wɔn mu. 11 Na asaase yi nyinaa bɛdan amamfo ne biribi a ɛyɛ hu, na aman yi bɛsom Babilon hene mfe 70.”’+ 12 “‘Na sɛ mfe 70 no ba awiei a,+ mɛma Babilon hene ne saa ɔman no abu wɔn bɔne ho akontaa,’*+ Yehowa asɛm ni, ‘na mɛma Kaldeafo asaase no ada mpan na ayɛ amamfo afebɔɔ.+ 13 Mɛma me nsɛm a maka atia saa asaase no nyinaa aba asaase no so, nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nhoma yi mu nyinaa, nea Yeremia ahyɛ ho nkɔm atia amanaman no nyinaa no. 14 Na aman pii ne ahemfo akɛse+ de me nkurɔfo bɛyɛ nkoa,+ na metua wɔn ka sɛnea wɔn nneyɛe ne wɔn nsa ano adwuma te.’”+ 15 Na nea Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka akyerɛ me ni: “Gye abufuw nsã kuruwa a ɛwɔ me nsam yi, na ma aman a meresoma wo wɔn nkyɛn no nyinaa nnom. 16 Na wɔbɛnom na wɔabow sram na wɔayɛ sɛ abɔdamfo, sekan a mede reba wɔn so no nti.”+ 17 Enti migyee kuruwa no fii Yehowa nsam, na memaa aman a Yehowa somaa me wɔn nkyɛn no nyinaa nom bi.+ 18 Mede Yerusalem ne Yuda nkurow+ ne n’ahemfo ne ne mpanyimfo befi ase. Mɛma wɔadan amamfo ne biribi a ɛyɛ hu ne biribi a nkurɔfo bɛtɛɛ wɔn anom ahwɛ* ne abusude,+ sɛnea ɛte nnɛ yi. 19 Wɔn a wodi hɔ ne Egypt hene Farao ne n’asomfo ne ne mpanyimfo ne ne manfo nyinaa,+ 20 ne firamanfiramanfo a wɔwɔ wɔn mu no nyinaa; afei Us asaase so ahemfo nyinaa; Filistifo+ asaase so ahemfo nyinaa, Askelon+ hene ne Gasa hene ne Ekron hene ne Asdodfo a aka no hene; 21 afei Edom+ ne Moab+ ne Ammonfo;+ 22 Tiro ahemfo nyinaa ne Sidon ahemfo nyinaa+ ne supɔw a ɛwɔ ɛpo so no ahemfo; 23 afei Dedan+ ne Tema ne Bus ne nnipa a wɔatwitwa wɔn asontɔrem nwi no nyinaa;+ 24 afei Arabiafo ahemfo nyinaa+ ne firamanfiramanfo a wɔtete sare so no ahemfo nyinaa; 25 afei Simri ahemfo nyinaa ne Elam+ ahemfo nyinaa ne Mediafo ahemfo nyinaa;+ 26 afei atifi fam ahemfo a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyiri no nyinaa, obiara bɛnom bi, wɔne wiase ahenni a ɛwɔ asaase so nyinaa; sɛ obiara nom wie a, Sesak*+ hene nso bɛnom bi. 27 “Afei ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Monnom na mommobow, na momfefe, na monhwehwe ase a muntumi nsɔre bio,+ sekan a mede reba mo so no nti.”’ 28 Na sɛ wɔka sɛ wɔrennye kuruwa no wɔ wo nsam nnom a, ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea asafo Yehowa aka ni: “Mobɛnom! 29 Na hwɛ! kurow a me din da so no mpo na merema mmusu no afi ase wɔ hɔ yi,+ na mo na mobɛfa mo ho adi?”’+ “‘Moremfa mo ho nni, efisɛ merefrɛ sekan aba asaase sofo nyinaa so,’ asafo Yehowa na waka. 30 “Na wo de, hyɛ nsɛm yi nyinaa ho nkɔm kyerɛ wɔn, na ka kyerɛ wɔn sɛ,‘Yehowa befi soro abobom,Na ɔbɛma wɔate ne nne afi ne tenabea kronkron hɔ. Ɔbɛbobom denneennen agu n’atenae no so. Ɔbɛteɛteɛm te sɛ wɔn a wotiatia amoa a wokyĩ nsã wom so no,Na ɔbɛto nkonimdi dwom agu asaase sofo nyinaa so.’ 31 ‘Dede bi begyigye akodu asaase ano noho,Efisɛ Yehowa ne amanaman no anya asɛm. Ɔno ankasa bebu nnipa* nyinaa atɛn.+ Na ɔde abɔnefo bɛma sekan,’ Yehowa asɛm ni. 32 Nea asafo Yehowa aka ni: ‘Hwɛ, mmusu bi fi ɔman so rekɔ ɔman so,+ Na ahum kɛse bi betu afi asaase ano akyirikyiri.+ 33 “‘Na wɔn a Yehowa bekunkum wɔn saa da no begugu hɔ afi asaase ano akɔpem asaase ano. Wɔrensu wɔn, wɔremmoa wɔn ano, na wɔrensie wɔn nso. Wɔbɛyɛ sɛ sumina* wɔ asaase ani.’ 34 Mo, nguanhwɛfo, munsu na monteɛteɛm! Mo, nguankuw mu atitiriw nso, mummunumunum,Efisɛ bere a wobekunkum mo na wɔabɔ mo ahwete no adu,Mobɛhwehwe fam abobɔ sɛ annwene a ɛsom bo! 35 Nguanhwɛfo no rennya baabiara nguan nkɔ,Na nguankuw mu atitiriw no rennya baabiaranguan mfa. 36 Muntie! Nguanhwɛfo no resu,Na nguankuw mu atitiriw no resu teɛteɛm,Efisɛ Yehowa resɛe wɔn adidibea no. 37 Asomdwoe tenabea no nyinaa ayɛ komm,Yehowa abufuhyew no nti. 38 Wapue afi ne hintabea te sɛ gyata a ne ho yɛ den,*+Efisɛ wɔn asaase adan biribi a ɛyɛ huEsiane atirimɔden sekan noNe n’abufuhyew no nti.”
^ Anaa “Asɛm a odiyifo Yeremia ka kyerɛɛ Yuda man nyinaa ne Yerusalemfo nyinaa ni.”
^ Nt., “mesɔree anɔpatutuutu ne mo kasae.”
^ Nt., “Ɔsɔree anɔpatutuutu somaa wɔn.”
^ Nt., “biribi a nkurɔfo bɛhwɛ abɔ hwirema.”
^ Anaa “mɛtwe Babilon hene ne saa ɔman no aso wɔ wɔn bɔne ho.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ din bi a wɔde frɛ Babel (Babilon) bere a wɔmpɛ sɛ obiara behu sɛ Babel (Babilon) ho asɛm na wɔreka.
^ Nt., “ɔhonam.”